Iran waxay uga digtay Mareykanka ‘qalad istiraatiiji ah’ ka dib hanjabaadii Trump
September 15, 2020 September 15, 2020 2 min read By wardeeq news Reporter
Iran ayaa uga digtay Mareykanka inuu sameeyo “qalad istiraatiiji ah” ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu ugu hanjabay Tehran warbixinada ay qorsheyneyso inay ugu aargudaan dilkii Jeneraalkii ugu sareeyay Qassem Soleimani.
“Waxaan rajeyneynaa in aysan sameyn qalad cusub oo istiraatiijiyad ah oo runtii qalad kasta oo istiraatiijiyadeed ah, waxay markhaati ka noqon doonaan jawaabta go’aanka Iran,” ayuu afhayeenka dowladda Cali Rabiei ku yiri shir jaraa’id oo telefishanka laga sii daayay Talaadadii.
Trump ayaa Isniintii ballan qaaday in weerar kasta oo Iiraan ka yimaada ay la kulmi doonto jawaab “1,000 jeer ka weynaanteeda,” kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Iran ay qorsheyneyso inay u aargudato dilkii Soleimani ee weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay qaadeen bishii Janaayo ee sanadkan.
Warbixin ay soo saartay warbaahinta Mareykanka oo soo xiganeysa saraakiil aan la magacaabin ayaa lagu sheegay in shirqool la sheegay in Iiraan ay ku dishay safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika la qorsheeyay ka hor doorashada madaxweynaha ee Nofeembar.
“Sida laga soo xigtay warbixinnada saxaafadda, Iran waxaa laga yaabaa inay qorsheyneyso dil, ama weerar kale, oo ka dhan ah Mareykanka iyadoo looga aargudanayo dilkii hoggaamiyihii argagixisada Soleimani,” ayuu Trump ku soo qoray Twitter-ka.
“Weerar kasta oo Iiraan, nooc kasta ha noqotee, oo ka dhan ah Mareykanka waxaa lala kulmi doonaa weerar lagu qaado Iiraan oo 1,000 jeer ka weynaan doona cabirkiisa!”
Xiriirka ka dhexeeya Washington iyo Tehran wuu sii xumaaday tan iyo markii Trump kaligiis ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka Iran bishii May 2018.
Washington ayaa riixeysa inay kordhiso cunaqabateynta hubka ee saaran Iran oo bilaabaneysa inay si tartiib tartiib ah u dhacdo bisha Oktoobar iyo sidoo kale dib u soo celinta cunaqabateynta Qaramada Midoobay ee Tehran.
Ciidamada badda ee Iiraan ayaa usbuucii la soo dhaafay sheegay inay kaxeysteen diyaarad Mareykan ah oo ku duushay meel u dhow aag ay dhoolatus milateri ka socdaan oo ku dhow marinka Hormuz.
Milatariga ayaa sheegay in seddex diyaaradood oo Mareykan ah ay ogaadeen raadaarka ciidamada cirka ee Iran kadib markii ay galeen aaga aqoonsiga difaaca cirka ee wadanka.
Xiddiga Bollywood Amitabh Bachchan ayaa cod siinaya shirkadda Amazon ee Alexa